Laisoa sy atody - Oeufs brouillés au choux - Recette de cuisine Malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 31 décembre 2016
Laoka mitsitsy anio: Laisoa sy atody (Oeufs brouillés au choux). Mitovitovy amin’ilay ovy sy atody sy saosety sy atody ihany ny fomba fikarakarana azy.
Fomba fikarakarana laisoa sy atody
Tetehina ny laisoa, endakendasina tsy atao malemy be. Asiana ail sy sel sy poivre.
Arotsaka ny atody voakapoka. Rehefa mahazo marihitra madity dia vita.
Tsy atao masaka be ny laisoa mba tsy ampavesatra azy satria ny atody efa mavesatra.
Afaka tsy ampiarahina amin’ny vary fa amin’ny mofo dipaina. Ankafizin’ny ankizy loatra.
atody sy laisoa, laoka malagasy, laoka mitsitsy, Oeufs brouillés au choux, sakafo malagasy tsotsotra
Article précédent : Boulettes de viande et achards de légumes
Mofo mangahazo à la cannelleArticle suivant :